May ny ankamaroan’ny fanaka sy ny dosie: nirehitra ny tranon’ny pastora FLM Ambatovinaky | NewsMada
May ny ankamaroan’ny fanaka sy ny dosie: nirehitra ny tranon’ny pastora FLM Ambatovinaky
Par Taratra sur 07/05/2019
Nampikoropaka ireo izay nahita ny setroka mainty be niainga teny Ambatovinaky. Ny trano vadim-piangonana io nirehitra io. Tsy nisy ny naratra, saingy ny fanaka sy ny dosie no levona.
Setroka mainty teny amin’ny tanàna ambony. Nanaitra ny mason’izay rehetra niandrandra io, omaly maraina. Betsaka ireo nametra-panontaniana, mahakasika ny toerana misy ny afo. Fantatra fa ny Trano vadim-piangonana ao amin’ny FLM Ambatovinaky io nirehitra io, ka namoaka ny setroka nananika ny habakabaka.
Arakan y fampitam-baovao avy amin’ny fiangonana, may tao ny ankamaroan’ny fanaka sy ny antontan-taratasy, tao amin’ity trano fonenan’ny pasitora ity. Fantatra kosa fa tsy nisy naninona ny raiamandreny mpitandrina sy ny ankohonany, araka ny vaovao nampitaina tao amin’ny pejin’ny FLM ambatovinaky hatrany.
Vantany vao niseho ny afo dia nikoropaka nampandre ny mpamonjy voinan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ireo nanatri-maso. Teo koa ireo mpiara-monina izay nifanome tanana, ka vetivety ihany dia voafehy izany. Tsy niitatra tamin’ireo trano manodidina, ka dia efa nampanahy ihany aza.
Mila mitandrina hatrany
Tranga mateti-piseho, indrindra amin’ny vanim-potoana toa izao ny haintrano mihanaka vetivety. Ny fisorohana ny loza amin’ny fitandremana hatrany no tena vahaolana voalohany. Matetika mahatonga ny firehetana ny akoson’herinaratra, miitatra amin’izay faritra mora mirehitra amina trano iray. Eo koa ny afon-dabozia na saribao, izay adinonodino, amin’ireo trano hazo.
Tsy ny tranga rehetra no ho tratran’ireo mpamonjy voina, satria iaraha-mahalala fa vitsy sady tsy tena ary fitaovana izy ireo. Manginy fotsiny ny fahasarotan’ny lalana sy ny toerana iasan’ireo mpamonjy voina. Fotoana ilana ny fifanomezan-tanana eo amin’ny samy mpiara-monina ihany koa ny tanga toa izany.